”Waa awoodaan!” – Chelsea oo bankiyada u jebinaysa soo xera gelinta Leo Messi & khabiir ka hadlay | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha ”Waa awoodaan!” – Chelsea oo bankiyada u jebinaysa soo xera gelinta Leo...
”Waa awoodaan!” – Chelsea oo bankiyada u jebinaysa soo xera gelinta Leo Messi & khabiir ka hadlay
(London) 28 Nof 2020 – Milkiilaha Chelsea ee Roman Abramovich ayaa doonaya inuu maal badan u huro xiddiga wayn ee Barcelona ee Lionel Messi, iyadoo ay khubaradu sheegayaan in Blues ay jookarkan ka dul qaadi karaan kooxda ay Premier League ku xafiiltamaan ee Man City.
City ayaa muddo dheer loo arki jirey midda ugu cad cad soo xera gelinta Messi haddiiba uu ka tegayo Barcelona dhamaadka fasalkan, maadaama ay leeyihiin maalqabeennada Khaliijka isla markaana uu jiro xiriirka ka dhexeeya isgaa iyo Pep Guardiola.
Yeelkeede, kooxda Chelsea oo xagaagii Liverpool ka dul qaaday xiddigo ay ka mid yihiin Timo Werner, ayaa ka mid ah kooxaha fara ku tiriska ah ee jeebka gacanta u gelin kara mushaharka qaaliga ah ee Messi.
“Chelsea sida muuqata waxay ku jirtaa isle’egta kooxaha heli akra Messi,” ayuu yiri weriye Guillem Balague, oo nin si wanaagsan u yaqaanna arbaha Argentina oo uu ka qoray buugga. “All that is true.
Messi ayaa xagaagii tegi rabey balse markii dambe baaqday kaddib markii uu muran ka yimid shuruud ku xirnayd heshiiskiisa oo ay Barca ku dalbatay adduun ku dhow hal bilyan oo doollar oo ah $820 milyan, balse dad ayaa kula taliyey inuu sanadkan iskala dhamaysto.
Previous articleXarunta Maamulka Tigraay ee Maqalla oo gashay gacanta DF ee Itoobiya
Next articleDalkii ugu horreeyey oo loo duuliyey shixnaddii ugu horreeysey ee tallaalka Covid-19 & goorta laga bilaabayo + Sawirro